Maskaxda iyo Wadnaha ee Tareenka Qaranka ee Tareenka Korantada ee ASELSAN | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaMaskaxda iyo Wadnaha ee Tareenka Korantada Qaranka waxaa loo aaminay ASELSAN
18 / 02 / 2020 54 Sakarya, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, ISDIFAACA, TURKEY
maskaxda iyo wadnaha tareenka korontada qaranka waxaa lagu aaminay aselsana
Marka la gaaro Barnaamijka 2020 ee Maalgashiga, bixinta Jidadka Tareenka Xawaaraha Sare laga keenayo ayaa la joogsan doonaa, iyo habka wax soo saarka gudaha iyo qarankaba loo sii furi doono wuxuu badbaadin doonaa teknolojiyada gaadiidka tareenka oo leh xawaare sare iyo balaayiin yuuuro dhaqaalaha.
Waxaa sameeyey horumar la taaban karo, waayo, wax soo saarka gudaha ee farsamooyinka muhiimka ah iyo warshadaha difaaca qaranka ee qaybaha kala duwan ee ay ka mid yihiin Turkiga, go'antahay by Program Investment sanadka 2020 la xoojinaya dheeraad ah. Go'aannada ku saabsan mashruuca "Qaranka ee Tareenka Korantada Korantada" oo lagu soo daray Barnaamijka wuxuu tusaale wanaagsan u yahay tan. Barnaamijka, oo bilaabay xilli cusub marka loo eego aagagga iyo dhalashada hababka gaadiidka tareenka, wuxuu ku qaadi doonaa horumar dheeraad ah dhinacyada sida kaalmaynta warshadaha gudaha, yareynta kartida tikniyoolajiyadaha meelaha loo baahan yahay, yareynta ku tiirsanaanta shisheeyaha, iyo gaarista guulo dhaqaale oo culus.
Waqtigii soo iibsiga dibedda wuu dhammaanayaa
Barnaamijka Maalgashiga ee 12, kaas oo loo diyaariyey si waafaqsan himilooyinkii lagu sheegay Qorshaha Horumarinta kow iyo tobnaad laguna daabacay Rasmiga rasmiga ah 2020ka Feebarwari 2020 iyadoo la raacayo Go'aanka Madaxweynaha, waxaa la tilmaamay in tareenka korontada qaranka laga hirgalin doono tas-hiilaad maxalli iyo mid qaran. Qaybta barnaamijka lagu xusay mashruuca “Xawaaraha Tareenka Sare ee Xawaaraha”, waxaa jira hadaladan soo socda: “Tababarrada Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Dheeraad ah looma keenayo dibadda iyadoo loo raacayo Ogeysiiska Madaxweynaha ee taarikhdu tahay 12, marka laga reebo 14.05.2019ka Tareen ee Xawaaraha Xawaaraha Sare kaasoo howlahooda wax iibsigu ay sii socdaan, Tilmaamaha tareenka ee Korantada Qaranka ee ay soo saartay TÜVASAŞ waxaa loo adeegsan doonaa jidadka tareenka xawaaraha ku socda. ” Waxaa sidoo kale lagu sheegay barnaamijka in qiyaasta wax soo saarka gudaha ay lagu arki doono heerka ugu badan iibsashada gawaarida iyo qalabka.
Dhanka waaxda, waxaa loo arkaa inay tani xoojin doonto gacanta shirkadaha shirkadaha maxalliga ah ka soo horjeedda heerka caalami ee ajaaniibta ah ee suuqa iyo in warshadaha gudaha iyo kuwa qaranku ay gaari karaan bartilmaameedkooda muddada fog iyo kan fogba waqti aad u gaaban haddii aysan ka noqonin hadda.
"Maskaxda" iyo "wadnaha" ee tareenka waxaa loo xilsaaray ASELSAN
ASELSAN, oo dhowaan bilaabay inay ku wareejiso awoodeeda tikniyoolajiyadda difaaca aagagga rayidka, ayaa sidoo kale lagu soo daray mashruuca Tareenka Korantada Qaranka. Turkey baabuur Industries Inc. qeybiyaha (TÜVASAŞ), sida ku xusan heshiiska, Nidaamka Kordhinta Tareenka iyo Nidaamka Maareynta Tareenka iyo Nidaamka Tilmaan Raadinta waxaa bixiya ASELSAN.
Nidaamka Maareynta Tareenka iyo Maareynta (TKYS), oo lagu qeexay "maskaxda" tareenka, asal ahaan wuxuu xakameynayaa howlaha muhiimka ah ee gaariga sida xawaaraha, khiyaanada (bareega), joogsiga, xakamaynta albaabka, isgoysyada rakaabka iyo iftiinka, halka nidaamkiisa raaxada-ku-saleysan sida hawo qaboojinta iyo macluumaadka rakaabka sidoo kale maareeya. TKYS kumbuyuutar oo loogu talagalay qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka oo leh heer sare oo isku halleyn iyo isku halleyn; naqshadaha, xakamaynta, bedqabka algorithms-ka, amniga iyo softiweerka isku-hallaynta ayaa si buuxda loogu wada dhan yahay.
Nidaamka Tiirarka Raadinta (beddellada ugu weyn, beddelka jiidda, beddelalaha kaaliyaha, matoorka taraafikada iyo galka qalabka) oo ay ku jiraan waxyaabaha lagu tilmaamay “wadnaha” ee tareenka waxaa loo fuliyaa qaab ku bixin doona wax-qabad aad u sarreeya oo leh barnaamijyadii asalka ahaa, qalabka iyo algorithms-ka.
Xawaare sare ee wax soo saarka
Thanks to qiimaynta ASELSAN khibradaheeda iyo awoodaha ay ku leedahay warshadaha difaaca mashruuca Tareenka Korantada Qaranka, labadaba xawaare wax soo saar iyo waqti ayaa la badbaadiyey. Xaqiiqda ah in ASELSAN ay ka dhacdo nidaamyada ah "maskaxda" iyo "wadnaha" ee tareenka laga soo bilaabo marxaladaha naqshadeynta waxay keenaysaa natiijo la yaab leh sida dhammaystirka wax soo saarka, kaasoo socon kara tobannaan sano xaaladaha caadiga ah, 1,5 sano.
€ 6 bilyan faa'iido
Currently Turkey loo baahan yahay ka dibadda, 106 ka mid ah 12 nooc tareen, halka 5 waxaa la kulmay iyada oo loo marayo mashruuca National Electric tareenka ee. Kiiska of haray 89 qaybood tareen oo leh qalabka maxalliga ah iyo kuwa qaranka si loo soo saaro ku dhowaad 3,5 billion euros la sheegay in sii joogi doonaan dalka Turkiga. Waxaa la sheegay in xaaladdan ay ku yeelan doonto saameyn badan warshadaha waxaana tirada la sheegay inay gaari doonto 6 bilyan oo Euro. Si loo kasbado faa'iidadan dhaqaale, muhiimada ay leedahay in amarro la siiyo TÜVASAŞ ayaa maanta la soo saaray. Tani waxay u ogolaaneysaa jadwalka dhagan oo dhan set tareenka ee Turkey kulantay qaro weyn aan ku tiirsan ka baxsan waxaa qortey oo si fudud loo dabooli karo baahida la xarunta degmada iyo qaranka.
Waxay bixisaa raaxo sare
Tareenka korontada qaranka, oo uu soo saaray TÜVASAŞ oo xawaarehoodu kor u kacay 160 kiiloomitir saacadiiba ilaa 200 kiiloomitir saacadiiba, waxaa loogu talagalay jirka aluminiumka ah oo ujeedadiisu tahay inuu noqdo kan ugu horreeya oo leh tayadan. Gawaarida 5-ta ah ee leh astaamaha raaxada sare ayaa loo soo saaray iyadoo la raacayo safarka udhaxeeya. Waxaa sidoo kale loogu talagalay inay buuxiso dhammaan baahiyaha rakaabka naafada ah.
source: Wargayska Milliyet
TUVASASA Hawlgabka Qaranka Tareenka Qaranka
Xarunta Cusub ee Newkapi si ay u noqoto maskaxda gaadiidka ee Istanbul
Bursaray xarunta xakamaynta maskaxda (Video)
Wadnaha baabuurta baabuurta ee gudaha iyo kuwa qaranka ee Sakarya
Soosaarida Tareenka Korontada Qaranka Ma ku sii socon doonaa TÜVASAŞ?
Wadnaha ee Antalya ayaa ku garaacaya Tünektepe
Qalabka Dalxiiska Wadnaha ee Tünektepe
tareenka iyo nidaamka maamulka